Date My Pet » Rudo Anogona Rambai Kwaungaita Out Yematambudziko?
Last updated: Nov. 21 2020 | 2 Maminitsi verenga
Zvakaitika pakunyanya kuda chinhu wose anofanira kuva kanenge kamwe ake / hwake. The chakanaka ndechokuti pane vanhu vashoma chaizvo vakanga vasiri ropafadzo zvakakwana kuti ichi chiitiko chinoshamisa.
Nepo rwendo yokuva rudo mupfungwa zvinovaka, pane zvakawanda zvimwe zvinoita kuti kuva norudo upenyu zvikuru. Rudo anogona here kuramba iwe kubva panhamo; verenga kuziva sei.
Muchava risingaperi zvishoma nezvishoma
Chii chinogona kuva kurei dambudziko pane kutarira akwegura? Rudo chingakutadzisai richidonhera rokusamhanyira kukwegura chayabata. Unoziva pamusoro oxytocin (ari romantics anotaura naro sezvo rudo kemikari)? Rudo kuita kunoguma wedzera muna nenhanho oxytocin evanhu muviri. Oxytocin zvinokonzera kugadzirwa Dhea, hormone yaizivikanwa kubatsira Anti-zvokukwegura.
Hamuoni here kuti ganda rako glows pashure pabonde? Hamuzivi here kuona sei akasimba unonzwa mangwanani pashure? Zvose izvi nokuda Anti-kukwegura zvakanakira Dhea.
Rudo rinodzidzisa kuti kuva nechivimbo
Zero kana yakaderera chivimbo kunongokonzera chimwe chinhu, upenyu rakabvongodzwa. Inogona achikumisa kuwana kodzero basa; rinogona kunokutadzisa ukakwanisa wakanzwa munguva dzokushayiwa, uye pakupedzisira kumanikidzira kuramba uri muduku sangano pane zvauri vanokodzera kuva.
Imwe yenzira dzakanakisisa divi migumisiro rudo kwakasimukira chaizvo mune chivimbo. Paunovaudza kudanana nemunhu kakawanda kuti munhu anoita kuti unzwe somunhu akakwana / Unofanira Kuva Nyanzvi Chaiyo. Ehe, mudiwa wako vangatsoropodza nokuda zvimwe zvinhu, asi kwose iwe nguva dzose kuramba zvakanakisisa kwaari / her. Izvi vachangoerekana instate kuzvidzora kutenda mamuri uye kuti uve nechivimbo munhu; uye kana imi muri chivimbo hafu matambudziko enyu chakagadziriswa.
Rudo anogona kuramba iwe kure zvinodhaka
Hakungavi nani yokudzivisa nechiyero kana mushonga zvinodhaka pane rudo. Vanhu muUnited States vari kunetseka zvikuru kukura mwero kushandisa zvinodhaka; Rudo kunogona kuva mushonga dambudziko iri.
Miitiro kufanana kushandisa zvinodhaka uye kunwa kazhinji byproducts mwoyo. A kufara muchato akazadzwa nerudo anogona kuchengeta kuora mwoyo panguva Bay uye nokudaro kuderedza munhu mikana yokukurirwa zvinodhaka uye doro yekudyidzana.
Rudo kunodzivisa STDs
Kana uchida mumwe munhu, iwe kwete kumutarisira / her kuti ave akavimbika kwamuri, asiwo vanowanzotevedzera kudzivisa kuita chinhu scratchy shure kuti munhu wacho. Kuti ariise zvikuru akabudira pachena, vanhu murudo havasiyi kuisa zvakavabatsirei kuramba vakavimbika uye kuti zvikurukuru nokuti havadi kuti vatadzire munhu wavanoda. asi, sei zvinogona chokuita dziviriro STD?
Pane kubatana zvakanaka simba.
Vanhu murudo nokuda tryst kwavo nokuvimbika kazhinji regai chinoshamisira une vakawanda zvepabonde nevadiwa uye izvi jana kunoderedza mikana yavo dzichiri STDs. Ehe, zviri nyore sezvo kuti.
Ndivo vamwe matambudziko rudo kunogona kukudzivirira kubva. Kana muchida kuziva zvakawanda rudo kunogona kuita, chete achawira murudo.
Ko iye Kutamba With You? Tarisa Out For Zviratidzo izvi!